Falanqaynta:Ethiopia, Sudan iyo Egypt heshiis ma ka gaari karaan biyo-xireenka itoobiya – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Falanqaynta:Ethiopia, Sudan iyo Egypt heshiis ma ka gaari karaan biyo-xireenka itoobiya
Falanqaynta:Ethiopia, Sudan iyo Egypt heshiis ma ka gaari karaan biyo-xireenka itoobiya
Itoobiya, Suudaan, iyo Masar ayaa ka wada xaajoonayay shan sano sidii loo dhammayn lahaa iyo hawlgalka sannadlaha ah ee biyo xidheenka. Awood uma yeelan inay heshiis galaan. Marka laga soo tago arrinta qoondaynta biyaha, waxay leeyihiin wali xallinta arrimaha ku saabsan yareynta abaarta iyo dariiqooyinka lagu xaliyo khilaafaadka mustaqbalka.
Saddex qaab oo yareynta abaarta ayaa la soo saaray. Kuwaani waxay daboolayaan abaarta, abaarta daba dheeraatay, iyo sannado qalalan oo daba dheeraaday. Sannad dheer oo qalalan ma aha abaar waxaana lagu soo daray heshiiskii Mareykanka ee la diyaariyey si fudud culeys badan loogu saaro Itoobiya. Waxyaabaha kale ee soo jeedinta ayaa sidoo kale ka dhigi kara biyo-xidheenka mid aan shaqeynin oo u diidi kara Itoobiya inay xaq u leedahay inay cabaan biyaha Niil.
Marka la eego diidmada Itoobiya ee soo jeedinta, uma badna in saddexda dal ay ku heshiin doonaan sida loo yareyn karo abaaraha mustaqbalka.
Previous articleItoobiya Oo ka Shakiday Dhaqdhaqaaqa Masar Ee Somaliland Iyo Aamusnaanta Xukuumadda Madaxweyne Biixi
Next articleRussia oo sheegtey iney soo saareen Dawada corona virus
Gaaladii oo ka hadashey in salaada laga hortigii lahaa Corona,iyo sida...